Umlando Wesikhungo oHlange Institute - Durban Local History Museums
By Durban Local History Museums6th October 2020June 24th, 2021Articles
Kule nyanga edlule kumenyezelwe ukuthi isikhungo i-“oHlange Institute” selifakwe ohlwini lwezindawo ezingamagugu esizwe sibekwa isikhungo sikahulumeni esibizwa ngokuthi South African Heritage Resources Agency (SAHRA) ebhekelene nokuphathwa kwamagugu esizwe nezifundazwe ezikuwona la magugu. Ekuthatheni le sinqumo abakwaSAHRA bakuveza ukuthi lesi sinqubo sokufaka isikhungo oHlange Institute ohlwini lwezikhungo ezingamagugu esizwe sonkana, ingoba sinomlando noMnumnzane Langalibalele John Dube okunguyena umsunguli weqembu lezombusazwe eselibizwa ngokuthi African National Congress ekade lalibizwa ngokuthi South African Native National Congress (SANNC), leli qembu lidume kakhulu ngomunye wabaholi balo ongasekho uDokotela Nelson Mandela oke waba umongameli walo.
Ekusukeni kwaso le sikhungo besibizwa ngokuthi i-Zulu Christian Industrial School, lesi sikhungo sisungulwe uMnumnzane John Langalibalele Dube ngonyaka we-1900, kanti-ke futhi kube isikhungo sokuqala sabantu abaNsundu, sisungulwe abantu abaNsundu. Ekuvulweni kwaso lesi sikole siqale sinabafundi abangamashumi ayisithupha nantathu (63) bonke okwakungabafundi besilisa bengekho abesimame, emva nje kwamasonto ambalwa sivuliwe le sikole inani labafundi lanyuka ngesivinini ngoba abafundi abayikhulu, iningi labo okwakungabafundi abahlala bude buduze naso isikole. Kuthe ngonyaka we-1901, le sikhungo saguquka igama laso saqanjwa ngokuthi oHlange institute, igama oHlange lelo lisho khona ukuthi lana khona zonke izizwe zihlangana ndawonye; “Where all nations come together”.
Kuzokhumbuleka ukuthi phambilini ebengekho amaphephandaba abhalwa aphinde ashicilelwe ngesiZulu ingakho-ke kuthe ngenyanga kaMfumfu ngonyaka we-1903, le sikhungo sibe sesiba ikhaya lephephandaba lokuqala lesiZulu elibizwa ngokuthi Ilanga lase Natal, nalo leli phephandaba umfoka Dube ube nesandla ekusungulweni kwalo. Kuthe ngonyaka we-1917, le sikhungo saqala sakha uphahla lokuhlala lwabafundi bamantombazane, baphinde baqala nokufundisa izifundo ezahlelelwe bona abesimame kuphela. Le sikhungo saphinde safaka izifundo ezimayelana nobuntu (“i-Humanities”), kanye nezokuphathwa komphakathi (phecelezi “i-Sociology”), inhloso yalokhu bekuwuhlomelisa abafundi ukuthi bakwazi ukuhlolelwa isitifiketi esibizwa ngokuthi i-Junior Certificate Examination, ngaso obewukwazi ukuthi ungene ezikhungweni zemfundo ephakeme esibala kuzo iNyuvesi yaseNingizimu Afrika (“University of South Africa”) kanye ne-“Fort Hare”.
Nelson Mandela casting his first vote,
Ohlange Institute, April 1994
Akukho mfula onganazikhisi, ngeshwa-ke ukufakwa kwemfundo yabaNsundu kuphela ngonyaka we-1953 uphoqwa ngumthethosisekelo obizwa ngokuthi “i-Bantu Education Act” kube nomthelela omubi kakhulu esikhungweni oHlange Institute ngoba kusinqunde amandla okusebenza ngendlela ebesisebenza ngayo ngaphambi kokushicelelwa kwalo mthetho we-“Bantu Education”. Kuze kwalamula khona ukuthi uDokotela Nelson Mandela avotele kuso le sikhungo ngonyaka we-1994 okhethweni lukazwelonke nokuyilapho abantu abaqale khona ukufuna ukufaka amehlo kulesi sikhungo. Kuthe ngonyaka we-2009, kusungulwa uhlu lokuvuswa kwezikole ezingekho esimeni olubizwa ngokuthi “i-Historic Schools Restoration Project” okunhloso yalo ukuvusa izikole ezinomlando kepha ezinganakiwe, naso isikhungo lesi esibizwa ngoHlange Institute sangasala ngaphandle ngoba phela bekungakhethwa iphela emasini.
Ngenani labafundi abangaphezu kwamakhulu ayishumi nambili (1200), kanye nabasebenzi abangamashumi ayisithupha (60), le sikole manje sekuyisikole esizigqaja ngaso, kanti sikhona nesifiso sokuthi amagalelo aso emphakathini aphinde abonakale njengasekuqaleni njengokuthi sikhiqize abaholi abanamava njengoba besenza eminyakeni eyadlule.